မိုးဆိုတာဘာလဲ မိုး (ယာ # ၃၃၈၀၄; # ၁၂၃၆၀; စာသားအရဖျက်သိမ်းလိုက်ခြင်း) သည် otaku jargon အတွက်ဂျပန်စကားလုံးဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်မူလက anime, manga, သို့မဟုတ် video game ဇာတ်ကောင်များ၏ဆွဲဆောင်မှုကိုဆိုလိုသည်။ ဥပမာ - meganekko-mo ဟူသောအသုံးအနှုန်း (ဂျပန် # ၃၀၅၂၄; # 33804; # 12360; # 30524; # 37857; # 12387;
ဘယ်လိုပုံတူအမျိုးအစားကိုသင်သိပါသလဲအမျိုးအစားပုံတူများ၊ ပုံတူများကိုယ်တိုင်ပုံတူပုံသည်သူကိုယ်တိုင်မှန်သို့မဟုတ်ကြေးမုံစနစ်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောအနုပညာရှင်တစ် ဦး ၏ဂရပ်ဖစ်၊ ပန်းချီသို့မဟုတ်ပန်းပုရုပ်ပုံဖြစ်သည်။ အုပ်စုလိုက်ပုံတူ - ပုံတူ, ...
ကျေးဇူးပြုပြီးမီးဖိုချောင်၏ဖော်ပြချက်ကိုရေးပါ။ အင်္ဂလိပ်လိုမဟုတ်ဘူးမီးဖိုချောင်သင်တန်း။ ကျွန်မရဲ့မီးဖိုချောင်ထဲမှာကြမ်းပြင်ပေါ်မှာလှပတဲ့လိမ္မော်ရောင် linoleum တစ်ခုရှိတယ်၊ အိပ်ရာဘေး၊ စားပွဲထိုင်ခင်းနဲ့စားပွဲတစ်ခုရှိတယ်။ တွင် ...
AUE ကဘာကိုဆိုလိုတာလဲ။ A. U.E. အကျဉ်းသား Urkaganskoe စည်းလုံးညီညွတ်ရေး။ AUE AUE ဟူသောအသုံးအနှုန်းသည်အကျဉ်းထောင်ဘဝအခြေအနေကိုရည်ညွှန်းသည်။ အရက်ဆိုင်နောက်ကွယ်မှာအထူးဘာသာစကားရှိတယ်ဆိုတာလူသိများတဲ့အချက်ပဲ။
ပုံတွေဘာတွေလဲ ?? ? labor, IZO ထိုသို့သော“ ချောင်းများ” သည်အထူးသဖြင့်အကြံဥာဏ်များ (သို့) သင်ခေါ်ဆိုသမျှ၊ ပလပ်စတစ်ဖြင့်ပြုလုပ်သော (ရွှံ့စေး) ... စတီးကာ (အီတလီ stecca ချောင်းမှ) သည်ပန်းပုဆရာ၏အဓိကကိရိယာဖြစ်သည် ...
impressionism သည်ဤလမ်းကြောင်းသစ်၏ကိုယ်စားလှယ်များလား။ Camille Pissarro (18301903) သည်အရောင်အသွေးစုံလင်လှသောရှုခင်းများကိုရေးသားသူ (impressionism) ၏ကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်သည်။ သူ၏ပန်းချီကားများကိုပျော့ပျောင်းသောထိန်းထားနိုင်သောအကွာအဝေးဖြင့်ဖော်ပြသည်။ တီထွင်ဖန်တီးမှု၏နှောင်းပိုင်းကာလများတွင်သူသည်ပြောင်းလဲသွားခဲ့သည်။
အဘယ်အရာကသင့်အားအထူးသဖြင့်လီယိုနာဒိုဒါဗင်ချီ၏အလုပ်ကိုဆွဲဆောင်သနည်း။ အရေးပေါ်လိုအပ်ချက်။ ငါလားမင်းလား လီယိုနာဒိုသည် Renaissance ၏တိုက်တန်းနစ်များထဲမှတစ်ခုအပါအ ၀ င်ဖြစ်သည်။
အနုပညာယဉ်ကျေးမှုဆိုတာဘာလဲ။ HUD ထဲမှာ PDA ကဘာလဲ။ ယဉ်ကျေးမှုအနုပညာယဉ်ကျေးမှုသည်အနုပညာတန်ဖိုးများစုစည်းမှုတစ်ခုဖြစ်ပြီးလူ့အဖွဲ့အစည်းအတွင်းပြန်လည်ထူထောင်ခြင်းနှင့်လုပ်ငန်းလည်ပတ်ခြင်း၏သမိုင်းကြောင်းအရသတ်မှတ်ထားသောစနစ်ဖြစ်သည်။ စုဆောင်းခြင်း၏ဒုတိယလိုင်း ...
လှပသောရိုးရာယူကရိန်းစာလုံးကိုဘယ်မှာအခမဲ့ရယူနိုင်မလဲ။ ထိုအယူကရိနျးဖောင့်အတွက်ရိုးရာကဘာလဲ? Cyrillic Yary # 769 အနေဖြင့် Cyrillic; Zhka (Ukr ။ Yarichka; ပိုမိုမှန်ကန်သောခေတ် # 769; Zhka သည်ဆလိုဗေးနီးယားအက္ခရာများမှbနှင့် ...
အပေးအယူကဘာလဲ? ကျင့် ၀ တ်နှင့်ဥပဒေတို့တွင်ပြofနာ၏အပေးအယူ (အပေးအယူညှိနှိုင်းမှု) ကိုဖြေရှင်းရန် ဦး တည်သောအပြန်အလှန်လိုက်လျောမှု၊ အပြန်အလှန်လိုက်လျောမှုများအားဖြင့်အချို့သောပconflictိပက္ခအခြေအနေအားဖြေရှင်းခြင်း၊ ရည်မှန်းချက်တစ်ခုရရှိရန်အတွက်လိုက်လျောခြင်း။ aaaaaaaaaa ah ...
အီဂျစ်ဖာရောဘုရင်၏ ဦး ခေါင်းချုပ်ပဝါ။ ယင်းတို့အနက်အရိုးရှင်းဆုံးမှာသားရေနှင့်ပိုးကြိုးများ၊ ရှေ့ဖက်ပတ်တီးများ၊ သတ္တုနှင့်ထည်များဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည့်ကြိုးများ ၀ တ်ဆင်ထားသည်။
ဂျာမန်အကူအညီဖြင့်ကဗျာများကိုရှာဖွေသည်။ ဂျာမန်အကူအညီဖြင့်ကဗျာများ Gottfried Benn Rosen ကိုရှာဖွေသည် (၁၉၄၉) ။ Wenn erst die Rosen verrinnen Aus Vasen Strauch ...
Tisul နှင့်ပတ်သက်သောမည်သည့်သတင်းအချက်အလက်သို့မဟုတ်ပစ္စည်းများရှိသနည်း။ လှပပြီးစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ကောင်းသောဒဏ္endာရီ။ အကယ်၍ ၎င်းကို၎င်း၏မှန်ကန်မှု၏အဓိကမေးခွန်းကိုသင်ထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်းမပြုခဲ့လျှင် "နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ" ရှေ့နောက်မညီညွတ်မှုများစွာကိုမြင်နိုင်ပါတယ်။
Giotto မှပြုလုပ်ထားသောနံရံဆေးရေးပန်းချီကားများအားခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းကို ကျေးဇူးပြု၍ ကူညီပါ။ FRESOK GIOTTO - ယုဒ၏နမ်းခြင်း (Kiss of Judas) မှဖန်တီးခဲ့သောအကျော်ကြားဆုံးရုပ်ပုံများအနက်တစ်ခုအား - Judas Iscariot တစ်ယောက်တည်း when ၀ ံဂေလိတရားပုံပြင်မှသုံးသပ်ခြင်း။
လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ခြင်းကဘယ်ကလဲ။ လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ခြင်းသည်ရှေး ဦး စွာစစ်ကဲ့သို့သောအချိန်ကာလများမှဖြစ်သည်ဟုယုံကြည်ရသည်။ ထို့နောက်တစ် ဦး ကိုတစ် ဦး လက်ချင်းဆန့ ်၍ လူများသည်သူတို့၌လက်နက်မရှိကြောင်း၊ ငြိမ်းချမ်းစွာရောက်ရှိလာကြောင်းပြသခဲ့သည်။ အတိအကျ…
အော်ပရာ၏အစိတ်အပိုင်းများ? Libretto၊ ဂီတ - သံစုံတီးဝိုင်းနှင့်အဆိုတော်များ (တစ်ကိုယ်တော်သီချင်းများ၊ သံစုံတီးဝိုင်း)၊ အစုံများ၊ မြင်ကွင်းများ၊ ဝတ်စုံများ၊ မိတ်ကပ်၊ ဦး တည်ချက် OPERA (အီတလီ - အော်ပရာ - ဖွဲ့စည်းမှု) သည်ရှုပ်ထွေးသောပြဇာတ်ရုံအနုပညာဖြစ်သည်။
Mikula Selyaninovich ကဘယ်သူလဲ။ အင်္ဂလိပ်အမည်နီကိုလလီအမည်ရှိ Mikula ရိုးရာပုံစံ၊ ဖြစ်နိုင်ချေရှိသည့် Mikhail ဟူသောအမည်ဖြင့်ညစ်ညမ်းမှုဖြစ်နိုင်သည့်အကြောင်းရင်းမှာ bogatyr-plowman Bogatyr ၏ပုံသဏ္peာန်သည်တောင်သူလယ်သမားများ၏အာဏာကိုပြသသည်။ အားလုံးသူ့ကိုသင်မတိုက်ခိုက်နိုင်ဘူး။
မင်းမဲ့စရိုက်တွေကဘယ်သူတွေလဲ။ pohuist A.K. နှင့် V. တို့ကဆန့်ကျင်ဖက်ဆစ်ဝါဒနှင့်အထူးသဖြင့်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်းခုခံတော်လှန်ရေးအားဖြင့်ဘာသာပြန်ထားသောဖက်ဆစ်စခန်းများရှိ ResistanceItalian မင်းမဲ့စရိုက်၏သမိုင်းမှစ။ လူကြိုက်များခေါင်းစဉ်ဖြစ်ခဲ့သည်။ မြောက်မြားစွာ ...
ကူညီပါ! Red Square အကြောင်းသင်သိသမျှကိုပြောပြပါ ဦး ။ အမှန်တရားကတော့မင်းကိုရရှိနိုင်တဲ့စာသားကိုရုရှားလိုရှာပါ၊ ရိုးရှင်းအောင်ရှင်းပါ။ ဒီနေရာမှာပေးထားတဲ့ဘာသာပြန်ကိုမသုံးပါနှင့်။ မင်းမလိုချင်ဘူးဆိုရင် ...
ရာသီ2anime Toradora ရှိပါတယ် ???? Danil Grishko, မင်းရဲ့အစ်မကိုငါကြည်နူးမိတယ်။ ဒီဟာက http://animehek.net ကိုဆက်လုပ်တာကိုငါယုံကြည်တယ်၊ ဒီနေရာမှာကြည့်ရှုမယ်ဆိုရင် anime ထွက်လာရင်ပိုကောင်းမယ်၊ ငါအရမ်းကြိုက်တယ်၊ မစောင့်နိုင်တော့ဘူး ...
81 အဆိုပါဒေတာဘေ့စဖို့ query လုပ်တဲ့အခါ, 0,916 စက္ကန့်ကျော် Generate ။